विश्व हात धुने दिवसः सेनिटाइजर भन्दा किन साबुन फाइदाजनक छ ? « Kathmandu Pati
विश्व हात धुने दिवसः सेनिटाइजर भन्दा किन साबुन फाइदाजनक छ ?
एजेन्सी – विश्व हात धुने दिन हरेक वर्ष अक्टुबर १५ मा मनाइन्छ । यसको उद्देश्य मानिसहरूलाई हात सफा राख्नेबारेमा सचेत गराउनु हो ।
कोरोना भाइरसको कारण, मानिसहरू पहिले भन्दा हातको सफाईको बारेमा बढी सचेत भएका छन् । मानिसहरूलाई हात धुन र बारम्बार सरसफाई गर्न सल्लाह दिँदै आइएको छ । यद्यपि महामारीका कारण सेनिटाइजरको प्रयोग साबुनले हात धुनु भन्दा बढि छ । विज्ञहरूले हात सफा गर्न साबुन राम्रो हुन्छ ।
अमेरिकाको सिमन्स युनिभर्सिटीका घर र समुदाय स्वच्छता प्राध्यापक एलिजाबेथ स्कट भन्छिन्, ‘साबुन र पानीले हात धुँदा सफा तौलियाले पखाल्नु भनेको सुनको स्तर मानिन्छ । साबुनले हातैले ब्याक्टेरिया र भाइरसहरू नष्ट गर्दछ ।’ साबुनले हात धुदा छाला सुख्खा हुन्छ र यसले हातहरूमा कीटाणुहरू निम्त्याउँदैन र बिरामी हुने सम्भावनालाई कम गर्दछ ।
साबुनले हात धुँदाका फाइदाहरू
साबुनले तुरुन्तै जीवाणुहरूलाई मार्ने काम गर्दछ । खोकी र हाच्छ्यु गर्दा छिटाहरु धेरै घण्टा सम्म रहन्छन् र हातहरू मार्फत तिनीहरू हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छन् । साबुनले यी जीवाणुहरूको तह हटाउन मद्दत गर्दछ, जसले उनीहरूलाई संक्रमण गर्ने क्षमता कम गर्दछ ।
एम्फीफाइल साबुनमा पाइने पदार्थ हो जुन भाइरसलाई निस्क्रिय पार्दछ । स्वास्थ्य विज्ञहरूले सार्वजनिक स्थानहरूमा साबुन प्रयोग गर्नु हुँदैन । साबुन केवल घरको प्रयोगाक लागि राख्नुपर्दछ र छालामा संक्रमण भएका व्यक्तिहरूले फरक साबुन प्रयोग गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूकाअनुसार तपाईंसँग साबुनको सुविधा नभएको खण्डमा मात्र सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ । ६२ प्रतिशत अल्कोहलयुक्त सेनिटाइजरले लिपिड झिल्लीलाई नष्ट गर्दछ तर ती गैर–भाइरसहरू जस्तैः कोनोरोभाइरस र राइनोभाइरसमा प्रभावकारी हुँदैनन् र साबुन जस्तो भाइरसलाई नष्ट गर्दैनन् ।
‘हाते सेनिटाइजरमा त्यहाँ तीनवटा चीज हुनुपर्दछ, यो मात्र प्रभावकारी मानिन्छ। यसमा उच्च अल्कोहल सामग्री रहेको छ र तपाईंको हातहरू र सम्पूर्ण औंलाहरूमा राम्रोसँग राखिएको छ’, स्वास्थ्य विज्ञले भने, ‘जलेको अनुभूति गर्न ६० प्रतिशत भन्दा बढि अल्कोहल प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो । सेनिटाइजर यदि तपाईंसँग हात धुने सुविधा छैन भने मात्रै प्रयोग गर्नुहोस् ।’
कोलम्बिया युनिभर्सिटीका एपिडेमिलोजिष्ट सान्ड्रा अल्ब्रेक्टले भने, ‘हात सफा गर्नलाई सेनिटाइजर चाहिन्छ, तर साबुनलाई पनि हात सफा गर्न पानी चाहिन्छ । तपाईं घरबाट बाहिर हुँदा पानीको विकल्प हुँदैन । सेनिटाइजरहरू अधिक लोकप्रिय छन् किनकि तिनीहरू छिटो र सुविधाजनक छन् ।’
सीडीसीका अनुसार तपाईले हात धुन तातो वा चिसो पानी प्रयोग गर्नुभए पनि फरक पर्दैन । साबुनले हात धुनु प्रभावकारी हुन्छ किनकि यसले छालाबाट कीटाणुहरू नष्ट गर्न काम गर्दछ । हातमा साबुन लगाएपछि, यसलाई २० सेकेन्डको लागि रगड्नुहोस् । त्यसपछि हातहरू राम्रोसँग धुनुहोस् र यसलाई तौंलीले सुख्खा पार्नुहोस् ।